ရွှေကစ်အကြိုက်ဆုံးပန်းပွင့်ပုံလေးဖော်ပြီး မွေးနေ့ကိတ်လေးဖန်တီးကာလက်ဆောင်ပေးခဲ့တဲ့ အားတီ - Cele Gabar
ရွှေကစ်အကြိုက်ဆုံးပန်းပွင့်ပုံလေးဖော်ပြီး မွေးနေ့ကိတ်လေးဖန်တီးကာလက်ဆောင်ပေးခဲ့တဲ့ အားတီ
မင်းသမီးချောလေးဝတ်မှုန်ရွှေရည်ကတော့ မကြာသေးခင်မှာ အသက်(၃၂) နှစ်ပြည့်သွားခဲ့ပြီလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ရွှေကစ်လို့ချစ်စနိုးခေါ်ကြတဲ့မင်းသမီးလေးကတော့ အနုပညာလောကမှာအောင်မြင်မှုမှတ်တိုင်တွေလည်း စိုက်ထူထားနိုင်ခဲ့ပါပြီ။ သူကတော့ မွေးနေ့အတွက် ပရိသတ်တွေရဲ့ ကြည်နူးစရာမွေးနေ့လက်ဆောင်များစွာကို ရရှိခဲ့ပါတယ်။
ဒါ့အပြင်သူငယ်ချင်းမိတ်ဆွေတွေရဲ့ချစ်ခင်ဂရုစိုက်မှုတွေလည်းရရှိထားပါသေးတယ်။ ရွှေကစ်ကတော့ ခင်မင်ရတဲ့သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ အဆိုတော်အားတီဆီကနေပြီး ချစ်စရာကောင်းတဲ့ မွေးနေ့ကိတ်လေးလက်ဆောင်ရခဲ့ပါသေးတယ်။ အားတီကတော့ ရွှေကစ်အတွက် မွေးနေ့ကိတ်လေးကို သေချာစဉ်းစားပြီး အထူးတလည်ဖန်တီးပြင်ဆင်ပေးထားခဲ့တာပါ။
အားတီကတော့ မွေးနေ့ကိတ်လေးနဲ့အတူ “Happy Belated Birthday ကစ်ကစ်
ကစ်ကစ်ခရီးသွားနေလို့ မွေးနေ့ Surprise ကို မနေ့ညမှလုပ်ပေးရတယ် !! ကိတ်ပေါ်ကပန်းက သူအကြိုက်ဆုံး Peony flower ပါ !! ရောက်နေတဲ့နေရာက လိုင်းမမိလို့ Live မလွင့်လိုက်ရဘူး ..
ဖွေးနဲ့ကစ်အတွက်အမိုက်စားကိတ်လုပ်ပေးတဲ့ The Bote’s Bakery thank you ပါ” ဆိုပြီးတော့ သူ့ရဲ့ဖေ့ဘွတ်ခ်မှာရေးသားထားပါတယ်။ ရွှေကစ်ကတော့ သူအကြိုက်ဆုံးပန်းလေးနဲ့ဖန်တီးထားတဲ့မွေးနေ့ကိတ်လေးကို သဘောကျနေတော့မှာအမှန်ပါပဲနော်…
Source : Ar-T,WuttHmoneShweYi
Previous post မွေးနေ့လေးမှာချီးကျူးစကားတွေနဲ့အတူ မွေးနေ့ဆုတောင်းပေးခြင်းခံလိုက်ရတဲ့ မင်းသမီးချောလေးမြတ်နိုးအေး
Next post ပရိသတ်အချစ်တော် နှင်းဆီ မင်းသမီးလေး ခေးဆက်သွင် စွံသွားပြီ